राजनीतिक विश्राम लिने तयारीमा एंगेला मर्कल : कस्तो रह्यो उनको कार्यकाल ?
जर्मनीकी चान्सलर एंगेला मर्कलले सन् २०२१ मा हुने आमनिर्वाचनमा चान्सलरको उम्मेदवार नबन्ने र आफ्नो पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियनको अध्यक्ष पनि नबन्ने घोषणा गरेकी छन् ।
मर्कलले राजनीतिबाट विश्राम लिने तर्खर गरिरहेको बेलामा उनको देशको राजनीति विभाजित भएको छ र अनेकौं सामाजिक चुनौतीहरू तेर्सिएका छन् । युरोपेली संघ पहिलेभन्दा निकै कमजोर बनेको छ र गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूको कुनै समाधान देखिएको छैन ।
एंगेला मर्कलका लागि लेखिएका राजनीतिक श्रद्धाञ्जलिहरू उनको व्यक्तित्व झैं कुरा चपाउने किसिमका छन् । उनले पदत्याग गर्नका लागि तीन वर्षअघि नै चेतावनी दिएको र राजीनामामा कुनै नाटकीयता नरहने देखाउन खोजिएको छ । उनको विरासतलाई केही शब्दहरूमा सीमित गरिएको छ : मट्टी (आमा) को व्यक्तित्व, मर्कल्न गर्नु (अर्थात् टारटुर गर्नु) र अहिले आएर मर्कलडाम्मेरङ (मर्कल सन्ध्या) जस्ता शब्दले उनलाई भूषित गर्ने गरिएको छ ।
यस्ता कुरा वाहियात हुन् । मर्कल कसैकी आमा होइनन् । उनले मध्यममार्गी राजनीतिका सिद्धान्तअनुसार शासन चलाइन् जबकि संसारमा विश्वव्यापीकरण र प्रविधिका कारण अभूतपूर्व अस्तित्वगत चुनौतीहरू तेर्सिएका छन्
वर्षौंसम्म मर्कलको चुनावी सफलतालाई उनको सक्षमताको प्राथमिक प्रमाण मानियो । हुन पनि लगातार चार कार्यकालका लागि लाखौं मतदाताले निर्वाचित गरेको नेता कसरी गलत हुन सक्छ र ?
तर १३ वर्ष (अनि सम्भवतः १६ वर्ष) सत्तामा रहेकी मर्कलको विरासतलाई तटस्थ मूल्यांकन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
उनको शासनकालमा जर्मन अर्थतन्त्रको स्थिति उत्कृष्ट रह्यो । युरोपेली संघको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सूचकांकहरूमा जर्मनीले धेरै राम्रो प्रदर्शन ग¥यो । बेरोजगारी दर घटेको छ अनि अनुकूल विनिमय दरको फाइदा उठाउन
पाएको जर्मनीका फोक्सवागनदेखि सिएमेन्स र बीएएसएफसम्मका उत्पादन विश्वस्तरीय छन् ।
तर यी संख्याको पर्तिर गएर हेर्दा मर्कलले युरोपको इन्जिन मानिने जर्मन अर्थतन्त्रलाई कस्तो स्वास्थ्य अवस्थामा पुर्‍याएकी छन् त ? लाभहरू समान रूपमा वितरण गरिएका छन् त ? किन विशेषगरी पूर्वका केही क्षेत्रहरू अझै पनि गतिहीन छन् ? कामदारहरू सन्तुष्ट छन् कि निर्यात उद्योगलाई नाफामा राख्नका लागि आवश्यक सस्ता आप्रवासी कामदारको हुलमा उनीहरू दबिएका छन् ? के जर्मनीले डिजिटल अर्थतन्त्र सञ्चालकलाई विकसित गरिरहेको छ र स्वचालित यन्त्रको भयंकर प्रभावका लागि तयारी गरिरहेको छ ?
नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तहरू निश्चित रूपमै सफल छन् तर मर्कलले तिनीहरूमा रहेको आधारभूत विरोधाभासहरूलाई सम्बोधन गरेकी छैनन् । तिनै विरोधाभासले पश्चिमी विश्वभरि असन्तुष्टि जन्माइरहेको छ । मर्कलले यथास्थितिलाई नचलाएकी मात्र हुन् ।
तर उनको निष्क्रियता उनको निर्णयहरूभन्दा राम्रो रह्यो । यी ६४ वर्षीया रसायनशास्त्रकी पूर्व प्राध्यापकले जटिल विषयमा गहिरो पकड राख्ने गरेको भनी प्रसिद्धि पाएकी छन् तर उनका धेरैजसो ठूला निर्णयहरू दीर्घकालीन
वैज्ञानिक तर्कवादभन्दा पनि परम्परागत नैतिकतायुक्त र मतदातालाई रिझाउने जस्ता अल्पकालीन उपायमा सीमित रहे ।
यसका विभिन्न उदाहरण छन् : सन् २०११ मा जापानको फुकुशिमा दुर्घटनापछि उनले जर्मनीको आणविक शक्तिलाई एक्कासि अन्त्य गर्ने (फेज आउट गर्ने) निर्णय लिइन् र यसको ठाउँमा राम्रो उद्देश्य लिएको तर अक्षम
नवीकरणीय ऊर्जा भित्र्याइन् र कोइलामा निर्भरताको अक्षम्य सम्झौता गरिन् । अनि हालसालै उनले चुनावमा हस्तक्षेप भएको भन्ने अस्पष्ट कारण देखाउँदै दमनकारी सामाजिक सञ्जाल कानूनलाई समर्थन गरिन् । त्यो कानूनले कर्पोरेट सेन्सरशिप थोपरेको छ, बहसलाई बन्द गरेको छ र त्यो निरंकुश राज्यहरूले अपनाउने दमनकारी नमूना बनेको छ ।
मर्कलका खराब निर्णयहरूमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आप्रवासीलाई गरेको स्वागत नै रह्यो । यो समस्याको स्केल अज्ञात थियो तर यसको प्रकृति परिचित किसिमकै थियो । मर्कलले अस्पष्ट किसिमको ऐतिहासिक वा जातीय जिम्मेवारी मानेर आफ्नै जनतामाथि आप्रवासी समस्या थोपरिन् ।
यो आप्रवासी लहरको महत्त्वपूर्ण प्रभावले समाजका सबै पक्षलाई छोयो । यसले पश्चिम अब सीमाको रक्षा गर्न वा विधिको शासनलाई संरक्षण गर्न तयार नरहेको वा अक्षम रहेको संकेत दियो । पश्चिमले सामाजिक सौहार्द्रका लागि स्थान नदिएको र आफ्नै जनताको चासोलाई प्राथमिकता नदिएको अनि युरोपमा सन्तोषजनक रूपमा समाधान गर्न नसकिने सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक विषय आफूमाथि थोपर्न चाहेको यसबाट देखियो ।
मर्कलले यो विषयमा कसैसँग सल्लाह नलिइकन आफैं निर्णय लिएकी हुन् र यसका लागि उनलाई समर्थकले पनि कार्यादेश दिएका थिएनन् । यसबाट पनि युरोपका शासकहरू कसरी निरंकुश र जनताबाट टाढिएका छन् भन्ने देखायो ।
सबै व्यक्तिको मानवीय गरिमामा जोड अनि हामीले आप्रावासीलाई पाल्न सक्छौं भन्ने सार्वजनिक सोचका साथ शुरू गरिएको आप्रवासी स्वागत पछि गएर निर्णय उल्ट्याउने काम र अन्ततोगत्वा सीमा बन्दमा टुंगियो । यी सबैले निर्णयप्रतिको पश्चात्ताप झल्काएका छन् ।
जर्मनीमा मूलधारका राजनीतिक दलहरू मरणावस्थामा पुगेका छन् अनि स्वीकार गर्न नसकिने उग्रवादीहरूले धरातलीय यथार्थलाई बरू बुझेको देखिन्छ ।
युरोपेली संघप्रति मर्कलको गैरजिम्मेवारीको प्रभावले यसलाई अलोकतान्त्रिक संगठन बनाएको छ र यसलाई ध्वस्त पार्न चाहने राजनीतिकर्मीहरू युरोपभरि उदाएका छन् । पहिले मर्कलले सरकारी खर्च घटाउने कामलाई दण्डित
गरिन् अनि पछि आप्रवासीहरूका लागि संरक्षणको वकालत गरिन् ।
मर्कल मार्काको मध्यममार्गी राजनीतिकै कारणले डोनल्ड ट्रम्प जस्ता व्यक्तिको उदय भएको हो त भनिहाल्न मिल्दैन तर ट्रम्पको राष्ट्रवादी विद्रोहको उदारवादी काउन्टरपोइन्टका रूपमा मर्कललाई उभ्याइने गरेको छ । तर
उदारवाद र राष्ट्रवादविरुद्धको संघर्षको अनुहार मर्कल बन्नुहुँदैन भन्ने उनका विपक्षीको अवधारणालाई उनका साझेदारले पनि अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपतिको जस्तो छुच्चो परराष्ट्रनीति मर्कलको नभएपनि युरोपकोपरराष्ट्रनीतिले इरान आणविक सम्झौता र सिरियामा चलिरहेको युद्ध लगायत विश्व हल्लाउने घटनामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।
जर्मन चान्सलरलाई युगान्तकारी परिवर्तनको सूत्रधार हुने ऐतिहासिक अवसर दिइएको भएपनि उनले परिस्थितिलाई सटीक रूपमा अध्ययन गर्न सकिनन् । र अहिले उनको उदासीनतालाई बिर्सिने भन्दा पनि इतिहासले उनको
उनको मूल्यांकन औसत नेता नभई खलनायकको रूपमा गर्ने सम्भावना छ ।
आरटीमा प्रकाशित इगोर ओगोरोदनेभको विश्लेषणको भावानुवाद